कक्षा कोठा अभावले पढाइ प्रभावित – Sajha Bisaunee
कक्षा कोठा अभावले पढाइ प्रभावित
। ८ माघ २०७५, मंगलवार १६:०२ मा प्रकाशित
पञ्चपुरी, ७ माघ ।
दुई कोठे भवन छ । त्यही भवनलाई बारेर चार कोठा बनाइएको छ । बालशिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुन्छ । विद्यालयमा एक सय २८ जना विद्यार्थी छन् । आवश्यक कक्षा कोठा नहुँदा पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–९ मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय माझीगाउँमा कक्षा कोठा अभाव हुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको हो । वि.सं. २०४५ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा दुई वटा कोठा अपुग भएको विद्यालयका शिक्षक भिमराज घिमिरेले जानकारी दिए । बारेर बनाइएको कोठामा एउटामा पढाउँदा अर्को कोठामा पढाइ प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।
वि.सं. २०६३ मा जाइका संस्थाले दुई कोठे भवन बनाइदिएको थियो । त्यसैलाई काठले बारेर चार कोठा बनाइएको हो । तर कक्षा कोठा अपुग हुँदा पढाइमा समस्या उत्पन्न भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनकदेव गिरीले बताए । ‘बालबालिकाहरूको बसाइँ पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं’ उनले भने ।
कक्षा कोठा निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको प्रधानाध्यापक गिरीले बताए । ‘वडामार्फत् नगरपालिकासँग दुई कोठे भवनका लागि रकम माग्यौं तर नगरले ४० हजार रूपैयाँ दिएर टार्न खोज्यो,त्यो पैसा हामीले लिएनौं’ उनले भने ।
पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष भक्ति पौडेलले वडामा कम बजेट आएकोले अहिले उक्त विद्यालयलाई समेट्न नसकिए बताए । उनले आगामी बजेटमा विद्यालयको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता सेमेत जनाए ।